Usuku Lwabesifazane Oluhle | Kusuka kuLinux
Suku oluhle lwabesifazane
En Kusuka ku-linux Asifuni ukuphuthelwa lolu suku, olunikezelwe kwisidalwa esihle kakhulu esihlala emhlabeni wethu. (Yize isibindi sisho okunye: P): Abesifazane.
Futhi, njengoba bengisho kumngani emizuzwini embalwa edlule, zonke izinsuku kufanele zinikezelwe kubo. Ngicabanga ukuthi iqiniso elilula lokukwazi ukuzinikeza impilo lingaphezu kokwanele. Ukuhalalisela okuningi ngokuba umama, ugogo, umlingani, unkosikazi, umngani ... ngamafuphi: ngokuba ngowesifazane nakho konke lokho okubandakanya, ukubekezelela kaningi njengamaqhawekazi izinto ezimbi kakhulu kulokhu kuphila, ngokuzidela kwakhe, ngenxa yothando lwakhe.
Ezweni lika Open Source futhi sinokumelwa kwabesifazane, futhi besicabanga ukudala okuthile kufana nalokhu en Kusuka ku-linux, namantombazane ajwayele ukubhuloga Ucabangani?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Suku oluhle lwabesifazane
Amazwana ayi-124, shiya okwakho
Umbono omuhle kakhulu ngamaphrofayili wamantombazane futhi yebo, usuku olujabulisayo kubo bonke abesifazane abavakashela i-Listlinux.net.
Kuhle kakhulu ... umbono xD
Ngibonga kakhulu! Sengivele ngifuna ukuthi leyo bhulogi yabesifazane beLinuxeras yenziwe, kepha hhayi iDebian eh kuphela! Ukuthi kunabaningi abasebenzisa ama-distros amaningi ...
linus stallman kusho
usuku lwenjabulo makhosazana
Phendula ku-linus stallman
Isidalwa esihle kunazo zonke nesiyingozi kakhulu, ngaphezu kwenyoka i-XD
Yebo, kimi, bangiluma yonke into ... 😛
Bheka iposi le-carcamal, uzobona ukuthi bayini abesifazane bangempela.
Emhlabeni woMthombo Ovulekile sinabamele abesifazane, futhi besicabanga ukwenza okufana nalokhu eDesdelinux, namantombazane ajwayele ukungena kubhulogi. Ucabangani?
Ngifuna futhi i-men.desdelinux.net ayikuhluphi hahahaha
Lapho-ke awufuni bakutshele izinto ... Oyedwa lapha okhuluma ngabesifazane bese uthola indawo yomalume ... Kungakanani okuhle ukugeza oPhikweni Lwezempi okwenzayo ...
Impela, imithetho yefaneli ilungile.
Yize kukuhle, uma abafundi belungile (engikungabazayo) akukho okwenzekayo, kuyenziwa futhi nesikhathi hahaha.
Ngokuzimisela, lo mbhalo ungenza ngihleke, njengabanye abenziwe lapha abangaculi (ahem ahem one-in-in-law-ahem ahem)
Cabanga wena, nginokuningi engingabonga ngakho abesifazane .. Angifani nawe okhetha ukubonga abafana .. Bengihlala ngithi i-avatar yakho iyangisolisa .. 😀
Ungangithinti amaqanda ami.
Ekugcineni, kuzofanele ngiye eCuba ukuze ngiyophonsa okuthile kothile futhi ungikholwe ngokungahambisani nalokhu.
Ngendlela, gxeka lapha
Noma ku- pvv92, noma i-taregon.
Nginezinto eziningi zokubonga abesifazane ngazo
Ucabanga ukuthi angazi? Hhayi-ke, ukuphela kwabantu okufanele ngabe ngiyababongela ngokuthile kulokhu kuphila ngabesifazane.
Kwenzeka kanjani lokhu, akunjalo?
Uma ungazi uhhafu wesisindo ...
Abesifazane + Umthombo Ovulekile = ABESIFAZANE BAMAHHALA BONKE!
Sihalalisela bonke abesifazane, ikakhulukazi uTina Toledo. Izindatshana zikaTina zinikeza ukwelashwa okujulile kumatimu awakhulumayo, agcina ukuhlangana nokuhlangana ngokuthembeka kwesakhiwo sombhalo futhi, ngaphezu kwalokho, bahlala bethola ukunconywa yilabo ababafundayo. Nesibindi sizovumelana nami: awekho amaphutha esipelingi.
Elav, ngicabanga ukuthi ukhohliwe ukunikeza lokhu kuhalalisela okusemthethweni kuTina, okuwukuphela kowesifazane (okwamanje) eqenjini lokubhala leLinux. Kumfanele! Kuhle ukuthi ibhulogi ibamba iqhaza kwabesifazane, hhayi njengabanye ... kakhulu ... kakhulu-hhayi-ngisho-nokubalulwa.
Yebo, uma ukubhala kubhala kusuka ku-PM, kepha kusekudala
Empeleni, ngamhalalisela kodwa hhayi ngeposi. Kuliqiniso ukuthi bekufanele akwenze ngokusemthethweni njengoba bekunguye kuphela owesifazane eqenjini lababhali.
@Tina bonita, ngiyaxolisa ngalokho, noma ngabe uyazi ukuthi siyakwazisa (nokuningi) noma kungabonakali ndawo kubhulogi.
Hhayi-ke, lutho, yenza ukubanga okuncane nge-Inkscape bese uyithumela kuye. Futhi ukuthi i-carcamal enesihlabathi yenza okufanayo, okubeka naphezu kweminyaka engu-9 umehluko.
Hhayke kungaba ngumbono omubi lowo. Nginga ... uma bengikwazi ukusebenzisa i-Inkscape. Kepha sawubona, lapha, ngezansi, othile wenze i-animated gif. Ngizokopisha futhi nginamathisele ikhodi ye-HTML; Angazi noma isithombe sizovela yini.
Izithonjana zihalalisela abesifazane abasebenzayo nge ~kukhona isixhumanisi on ukuphambuka
Cha, akazange aqhamuke, ha ha ha. Ngiyethemba iNdodana Link ayikhathazwa ngokuzama ukusebenzisa i-gif yayo lapha.
Ukumcaphuna? Lutho neze
Ngiyabonga inkulungwane Carlos
Ukube wafunda ucezu lwami ebengilubhala eminyakeni emihlanu eyedlule ... bengingabhali neze iSpanish esingesihle futhi ngomsebenzi bengingaqonda ukuthi kufundani! iqiniso?
Isibindi, U-Elav wangibongela ekuseni kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngakho konke futhi ngendlela efanayo ukwangana okukhulu kuwo wonke amantombazane asifundayo.
Kuyahlekisa, lapha ulubiza ngoSuku Lwabesifazane kepha eSpain silubiza ngokuthi yi-Working Women's Day, futhi imvamisa inezincazelo ezithile zomzabalazo wenhlalo kanye nenkululeko yobulili. Angazi noma kwenzeka into efanayo eCuba.
Yebo, empeleni lapha sibagubha njengoSuku Lomhlaba Wonke Lwabesifazane, angazi noma ngabe yilabo abasebenza noma abangasebenzi hahaha.
Ukuhalalisela okuningi ku TinaUbe nosuku oluhle, ungasebenzi kanzima futhi uphumule… ukufanele lokho hahaha.
Siyakuhalalisela futhi Alba, mnike ikhompyutha entsha LOL !!!
Noma kunjalo, sihalalisela bonke abesifazane 😀
Siyakuhalalisela uTina, ube nosuku oluhle, ungasebenzi kanzima futhi uthole ukuphumula… kumfanele
Uyabona? Bese usho lokho uma ngikutshela
Siyakuhalalisela futhi ku-Alba, umnikeze ikhompyutha entsha
Kungani ungamhluphi ngento yekhompyutha? Ngemuva kwalokho ungitshela okwami
Ngiyabonga inkulungwane UGaara, Ngiyabonga kakhulu ngokuhalalisela.
Ukuhaga okukhulu kwe- Alba Halala babe!
Usuku olujabulisayo kubo bonke abesifazane bomhlaba ^^
Nginikezele i-gif encane e-animated kuze kube yilolu suku http://son-link.deviantart.com/#/d4s7uba
Nelukuluku.Bewazi yini ukuthi ezinganekwaneni zamaGrikhi, ikusasa lalibashushisa labo ababeshaya omama babo, noma ngabe babengcole kangakanani?
Angizange nginikeze umlando njengeminyaka emi-2 cishe engu-3, ​​uma singeza kulokho ukuthi ngiyaguga ngaleso sikhathi futhi ngicabanga ukukhumbula lokho
Lokhu ngakufunda encwadini enginayo yezinganekwane zamaGrikhi, hhayi ekilasini, ukuthi ngiqede izifundo zami emuva ngonyaka we-1999 XD
Yini efanayo ne-carcamal, enye ye- «Club Carcamal» hahaha
Mhlawumbe, okubi kakhulu, awukwazi ukungitshela impandla, ukuthi nginezinwele eziningi futhi angisoze ngaba nempandla.
Kepha ngiyakwazi ukutshela i-elav
Lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi bangabandlululwa (yize sebemdala):
Ngaphandle kokuwela esikweni le-shit
Labo besifazane abazwakala kabi .. kepha kuyentengiselwano kakhulu .. Ngiyethemba ukuthi ngelinye ilanga ngiyobona owesifazane ehlabelela idwala eliqhubekela phambili noma idwala lokuhlola lobuchwepheshe <3 <3 <3 ejeje
Ezentengiso? Akunjalo, uma ufuna okuthile kwezentengiso kukhona i-metalcore
Yebo, iqiniso ukuthi iqembu lesitayela se-Porcupine Tree elinezwi lowesifazane ngeke libe libi nhlobo, kuzofanele siwubone umphumela. Noma ubuhle be-Opeth ... kepha mhlawumbe kukhona okuncane okushaya kancane.
Yebo, iqiniso ngithanda lokhu: http://www.youtube.com/watch?v=DNgWCP9Oqs0&feature=related
Kuhle i- Stone! Kukhulu Beck!
Kungcono ulalele insimbi esikhundleni salezo zinto ...
Akukubi neze. Ngithanda cishe yonke into, inqobo nje uma kukhona ikhwalithi.
Ngiyayithanda insimbi eqhubekayo kodwa hhayi i-Opeth, i-guttural kaMikael ibonakala ingamanga
Mhlawumbe ngokuthanda umbala. Okubi kakhulu engingakusola ku-Opeth ukuthi sekuwumsebenzi womuntu oyedwa kaMichael Akerfelt, kepha hheyi ...
Kunamanye amaqembu amahle kakhulu aqhubekela phambili, futhi njengamanje uNocte Obducta wenzeka kimi, uma uku-rolllo yaseJalimane.
Ukuthuthuka yilokho engikuthanda kakhulu:
Futhi ngaphezu manje angikwazi ukucabanga. Inkinga nge-Opeth ngaphandle kwezwi elithi "guttural" likaMikael Akerdfelt linama-acoustic amaningi bese uwabiza nge-Progressive Death Metal, ukuthi insimbi ye-Death inakho engikuphulukisayo, okungukuthi, akukho. I-Real Progressive Death Metal, ngokwesibonelo, i-albhamu ethi Death's The Sound Of Perseverance.
Nkulunkulu wami, lokhu sikuphendule i- <° Death Metal .. Yimuphi umculo omuncu owulalela i-xD
Lawo maqembu awamabi. Ngithanda kakhulu iSymphony X - nginawo wonke amarekhodi.
Into nge-Opeth ukuthi isishintshe kakhulu eminyakeni edlule. Kulezi zinsuku ithambekele kakhulu ekuhlolweni, cishe kuJazz, okungeyona into engeyinhle, kepha-ke, noma ngubani ofuna umculo oqinile uzothola konke lapho ...
Bheka i-SepticFlesh, lokho kukufa okuhle ngempela:
Yebo, uCorey Taylor ovela kuSlipkpop wakho othandekayo, ngiyaxolisa, uSlipknot kuthiwa usebenzisa amazwi we-guttural, ngiqonde ukuthi ngoba lelo guttural alinalutho, kunalokho liyizwi lenja ye-badass.
Ahem, ngathi angibonakali: C
Ngiyakuhalalisela kepha uma ulungile akukho okunye, uma kungenjalo, bakunikeza hahahaha
Ngakho-ke, buza i-elav ukuthi ngabe ngilungile noma cha 😛
Uthi yebo kodwa ngoba uyakuthanda, ngineqiniso lokuthi ngikutholela amaphutha hahaha njengawo wonke umuntu
Akekho ophelele, ngisho nawe.
Ngicabanga ukuthi ukuphela kwento ongaphuthelwa ngamadoda ... bengivele ngazi ukuthi leyo avatar yakho ... imbi kabi.
Sizokwenzenjani ... Impela ngineziphambeko, njengobisi olubi, anginawo umzimba engingawuthanda, njll.
Ngicabanga ukuthi ukuphela kwento ongaphuthelwa ngamadoda
izinga: Kudala nempandla
KZKG ^ Gaara: Indoda endala enamehlo akhanyayo
Futhi kudala bonke abanye, kodwa ngaphandle kwezithombe angazi okuningi
Angazi ukuthi ngingawaqoma kanjani amadoda, lokho kungumbombayi, okungenzeka ukuthi akunabo abathandana nobungqingili
Mhh: /, awuyena umJapane, awukwazi ukushisa (?), Naa uphume amahlaya, ubuhle bukhonjiswa kuwo wonke umuntu uma kuyi-XDDDD ngempela, yenza umnikelo kuDeldelinux porvafor XDD
pandev92 awunalo ilungelo lokukusho uze uthole ukuthi abesifazane baseJapan ababi, bheka laba engikuthumele bona ngeposi, bangabantu besifazane bangempela.
Futhi u-elav uthe uKitty ushisa kakhulu, ukuthi muhle, njll kepha ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi uyayithanda hahaha Sengivele nginezinhloso ezimbili zeKitty emqondweni.
Angishongo ukuthi uKitty uyashisa, kuphela lokho ngokunambitheka kwami ​​yebo, muhle. Kepha ngikuthola kunelukuluku lokuthi indoda engazi lutho ngabantu besifazane, ingaphutha kanjani ... Mmm iyathandeka ..
Uyintanga yakho, akunjalo? Kulungile-ke ngokunambitha kwami ​​yisalukazi.
Ngeke ngiyiqonde le ndaba, kepha nginokunambitha okungcono kuneningi, ngoba kubonakala kimi ukuthi kukhona i-elav ethile lapha ethanda abesifazane abakhuluphele.
Ngisho, uthanda abangavuthiwe, akunjalo? … LOL !!
Anginalo usuku ...
Angifuni ozongithatha isikhathi esingaphezu konyaka
Ngubani mina? Cha cha, kungcono ngingasho lutho kuye, ukuthi-ke uchitha usuku ethinta amabhola ami ethi uma ungibeka, uma uKitty lokhu, uma uKitty enye i-xD
Hahaha, yeka umngani omuhle XD
Elav ufuna ngibeke ukuphawula okuthile, huh?
Ngendlela, uchitha usuku ungitshela ukuthi ngithanda i-blonde evela esikhungweni sami, futhi ngazi amaphutha anawo avela kuvidiyo, noma kunjalo ngakhohlwa enye, ukuthi ngithatha ikhanda lokuphakama.
Cha, angisiye umngani kanoma ngubani futhi akekho umuntu ongumngane wami
Kepha ngiyathanda ukukhuluma iqiniso
Okushiwo yi-Courage subliminally ukuthi ubeka isithombe.
Impela, noma ngabe kuyidumbu njengoba nonke ni hahaha.
Ngathi nginamaphutha futhi yilokho kuphela, futhi ngiqinisekile nginama-hahaha amaningi
izinsuku ezijabulisayo kubo bonke nakuwe isibindi hehehe
Cha, ngiqondile, kimi ngosuku lwamadoda haha
Bah! Ngiyakwazi ukucula iDeath Metal 😛
Ngenhlanhla, amanye ama-non-reggaeton esithangamini futhi aqondana nensimbi yokufa, hhayi njenge-carcamales elav ne-Gaara abathanda i-nu reggaeton metal.
Ngiyabonga haha ​​Che kanti luyini usuku lomuntu?
Izintombi zami bezilokhu ziyisoftware ephathelene 😛
Izinsuku ezijabulisayo wonke umuntu. Lo mhlaba ubungangconywana uma abesifazane belalelwa ngokwengeziwe, kepha izinhlelo zezinzalamizi ziyenqena ukuvumela indlela. Sethemba ukuthi ukulingana okusebenza kahle kuzotholakala ngokuhamba kwesikhathi futhi isithunzi salowo muntu asisoze saphazanyiswa, kungakhathalekile ubulili.
Kancane kancane sizoshiya ngemuva umphakathi wamanje we-phallocentric ... 🙂
Yebo, angazi ukuthi yiziphi izinqubo zokhokho okhuluma ngazo, ngoba lapha eSpain awukwazi ukusho lutho olumelene nowesifazane, noma ungumuntu omubi, lapha eSpain uma owesifazane ekulahla ngokushaya, uya ejele noma ungenabufakazi futhi ungazifela nge-chirona izinyanga eziyi-7-8 ngaphandle kwekhambi, lapha eSpain, amadoda ahlala elahlekelwa yimisho yesehlukaniso angakwazi ukugcina izingane, nakhu kuzokwenzeka okuphambene nalokho.
Ngenxa yalesi sizathu, phakathi kwezinye izinto, angifuni ukushada, ngoba lapho-ke ngihlala emgwaqeni obhuqayo, futhi bengizokwenza kanjalo.
Abantu ababi ngaso sonke isikhathi yithi, kepha uma benza okuthile kithi, akukho okwenzekayo
Yikuphi okuhlangenwe nakho onakho nabesifazane? ... cha haha, ngakho-ke ungafiki usho imishwana efana neyokugcina, ukuthi awuyeke ukulunga ... kepha hheyi, bengifuna ukukuncisha kancane hehe.
Ngeke ngibe nayo, sengikutshelile vele ukuthi angifuni ukulimaza intombi yami
Lokho kuyiqiniso, kepha khumbula ukuthi abesifazane abasebenzayo bahola kuze kufike ku-20% ngaphansi esikhundleni esifanayo nabesilisa. Ngokwenani elilinganayo, umholo ophansi awubonakali ulungile kimi.
Umbuzo ngodlame eceleni, ukuthi ubulungiswa buvumela abesifazane abasehlukanisweni kuhlobene kakhulu nesiko elikhumbuza i-machismo; Ukube lo wesifazane ubesekhaya futhi engenawo umsebenzi, njengoba kwenzeka esikhathini esingengakanani esidlule, ubengaba yini yena ngaphandle komthombo wokuhola? Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi lokho kuzoshintsha, ngoba izikhathi sezishintshile.
Ngicabanga ukuthi kufanele kwenziwe umehluko phakathi kwemisebenzi yabesilisa neyabesifazane, ngoba abesifazane bangcono ekwelapheni abantu, ngokwesibonelo, futhi thina, ngakolunye uhlangothi, sinamandla amakhulu ngokomzimba.
Vele lokho akusho ukuthi kukhona abesifazane besilisa (nginombono owodwa) namadoda angenamandla
Yebo, uqinisile ... kodwa-ke, ngabe abesifazane ababethula le mithetho? Ngabe amajaji ahambisa lezi zigwebo ngabesifazane? Ngabe abashushisi ngabesifazane?
Ngiyacela ... ungabulawelwa ukholo ukuthi umphakathi wanamuhla ungomunye owenziwe cishe ngesisekelo sezinqumo ezenziwe ngabantu, iningi labo!
Woza ... selokhu ngihlala I-México Ngithole ukuthi uma owesifazane edlala ibhola -Ibhola- wehlukaniswa ngokuthi "machorra" ngesisekelo sani? Ngabe ibhola likanobhutshuzwayo ngumdlalo okhethekile kwabesilisa?
Ngonyaka odlule kwahlangana imiqhudelwano emibili: ICopa America 2012 futhi i INdebe Yomhlaba Yabesifazane Yebhola Likanobhutshuzwayo Germany 2012... futhi angifanele ukusho ukuthi yikuphi kulaba bobabili okwakukhona, kude kakhulu, ukusakazwa okuningi kwabezindaba yize iningi lemihlangano laliyisicefe, namaqembu aphuma ezocabanga ngomphumela. Ngabe ukulingana lokhu?
Ngisho noma owesifazane eba nomsebenzi wendoda, noma lokho kukholwa kuphela kwabesilisa, kucatshangwa ukuthi ungowesifazane ongenaconsi lobufazi. Futhi lokhu akulona iqiniso.
Isibindi, uma ngabe ubungazi, kunowesifazane ogama lakhe lingu Lisa kelly owenza umsebenzi lapho amadoda amaningi angenanhlonipho ehlulekile khona: http://www.youtube.com/watch?v=ylKy9_3OavQ
Noma kunjalo ... kubonakala kimi ukuthi nasezindaweni ezinjengalezi lapho iningi labanumzane kusekhona ama-misogyns adlangile futhi, okubi kunakho konke, ngaphandle kwesisekelo semfundo ngoba bahlala becabanga ukuthi bayahlekisa ngamahlaya abo awubulima abacabanga wonke umuntu owokubekezelela kahle Isibindi?
Ake sibone, ngithe akukho mthetho ngaphandle kokukhetha, okwenzekayo ukuthi kufanele ufunde:
umabhebhana kudlangile futhi, okubi kunakho konke, ngaphandle kwesisekelo semfundo ngoba bahlala becabanga ukuthi bayahlekisa ngamahlaya abo awubulima abacabanga ukuthi wonke umuntu ukhona ukubabekezelela
Iphutha, noma ngabe ukuphawula kusho okuhlukile.
Angibazondi abesifazane, ukuthi bathi i-elav noma i-KZKG ^ IGaara akusho ukuthi kuyiqiniso, ngoba ukusho ukuthi basuselwa ekutheni angifuni ukuba nentombi, ehloniphekile njengayo yonke imibono.
Ukuphawula kwami ​​kungabonakala njengokuphambene kepha kuyiqiniso, iningi labesifazane linamandla amancane emzimbeni kunabesilisa, kepha kunalokho bangcono endabeni yokusebenza kwengqondo, bekhuluma nabantu (ngokususelwa olwazini lwami, Uthi thina bantu besilisa asinalo ulwazi mayelana nalokhu, ngiyazifaka)
Cha, leyo mithetho ikhuthazwe ngumphakathi omkhulu wabesifazane abangamaNazi nabesifazane esinabo kulelizwe, hhayi omunye umuntu.
Ucabanga ukuthi kuzoba khona kanjani ukusakazwa okuningi kwabezindaba ngento abantu abaningi abangenayo intshisekelo kuyo, abesilisa nabesifazane.
Bengingeke ngibone i-American Cup noma iNdebe Yomhlaba Yabesifazane, eyokuqala iyisicefe, okwesibili ukuthi angithandi ukubona abesifazane abanemisipha, ngiyibona imbi impela, abesifazane bahlukaniswa ngokungabi mabi njengamadoda.
Ndoda, yibhola, lokho kubalulekile, okungenani lapha
Amagama, amagama ... ukusho okushilo kulula. Hlola izimangalo zakho. Kepha-ke, okushilo kuyisibonelo ... uma abesifazane bezuza impumelelo ebavikelayo ekushayeni amadoda -http://blog.educastur.es/correlavoz/violencia-de-genero/victimas-mortales-por-violencia-de-genero-2003-2008/- Bangabantu besifazane abangamaNazi ... wow!
Bengingeke ngiyibuke iNdebe yaseMelika noma iNdebe Yomhlaba Yabesifazane, eyokuqala iyisicefe, eyesibili ukuthi Angithandi ukubona abesifazane abanemisipha, ngibona kukubi impela, abesifazane bahlukaniswa ngokungabi mubi njengamadoda.
Uyakuqonda yini lokhu okushilo? Futhi kungani abesifazane kufanele babe bahle futhi babe ngabesifazane? Ukujabulisa abantu? Futhi kungani amadoda kufanele abe mabi? Ukubenza babukeke be "macho" kakhulu?
Kepha futhi ukuthathaphi ukuthi abesifazane abadlala ibhola banemisipha? Kuyacaca ukuthi kunethoni yemisipha ekuzivocavoca umzimba, kepha lokho akususi nakancane ukusikisela kobuntu besifazane.
Ngakolunye uhlangothi, iqiniso lokuthi awufuni ukubona noma imiphi imicimbi emibili lisho ukuthi abanye abafuni ukukubona. Iphuzu akukhona ukuthi uyafuna ukukubona noma cha, kepha iqiniso lokuthi umuntu unikezwa ukubaluleka okukhulu kanti elinye alinakwa ngokuphelele, yize ikhwalithi yezobuchwepheshe enikezwa ngabadlali, okungenani, iyefana naleyo yamadoda . Yilokho iphuzu. Futhi angisakhulumi ngokusakazwa kwe-TV, cha, ngiqonde ukushoda kwezindaba. Ngabe lokho akukhona ukungalingani njengoba kuqala ekubandlululweni ukuthi akekho umuntu ozoba nentshisekelo yokubona iqembu "labesifazane abanemisipha" ligijima "kabi" ngemuva kwebhola?
pandev92 awunawo umbono uze ukufunde lokho AmaJapane amabiBheka labo engikuthumele kubo ngeposi, bangabantu besifazane bangempela.
Bheka nje leli pearl lokuhlakanipha kusuka Isibindi… Futhi uthi akathandi abesifazane noma abe yindoda….
Ngabe angibathandi yini abesifazane baseJapan okusho ukuthi ngithanda ubulili futhi ngithanda kabi abesifazane?
Ake sibone, ukuthi babukeka kabi kimi akusho ukuthi ngiyabazonda abesifazane
Kunezikhathi empilweni lapho ukuthula kungaba yisimo sokuhlakanipha kakhulu. Njengoba sisho ezweni lami: "Musa ukuqhubeka uziphonsa kuwe." Ungaya noma kuphi lapho uthanda khona, kodwa umbono wokuthi ungubani uhlala. Futhi yize ungasithathi njengabangane bakho "njengoba usho kaningi kangaka" ngizokunikeza izeluleko sengathi: Shhhhhh ..
Sengiyibonile imidlalo yabesifazane kodwa ngeshwa esifundeni sami izinga lobuchwepheshe liphansi kakhulu, sengathi bangamantombazane egcekeni lesikole. Futhi ngokuba yinsimu enkulu kangako, ezinye izimfanelo ezinhle azikwazi ukwaziswa :-P. AmaGalician amahle adlala ngaphandle.
@ pandev92, abesifazane abadlala i-volleyball olwandle nabo basesimweni esihle futhi uzoyithokozela leyo midlalo. Kunokubi futhi okuhle kuyo yonke imidlalo (ngisho nakwisumo labesifazane ¬ ¬).
Ngikutshela ngothando. Ungakutholi okungalungile.
Akukona ukuthi ngikuthatha ngendlela okungesiyo, ngiyabona ukuthi une-cocoa ejwayelekile, njengoTina.
Lokho engibazondayo abesifazane, owazi ukuthi isihogo usithathaphi
Tina, uzotshela umuntu osebenza eqenjini elidumile eSpain ukuthi ngubani amagama? I-Muahahahaha, xD.
Bheka nje uhulumeni wephiko langakwesokunxele owedlule, amagama? UPajin, uDe la Vega, uBibiana Aido futhi singaqhubeka ahhahaa.
IsibindiAngazi ukuthi kusho ukuthini lokho "ukhokho", kepha ngifuna ukucacisa ukuthi anginalutho nawe ... kepha iminenke! ... okokuqala lapho ungibiza "ngindala" ngahlekiswa ... ngokwesibili kwabonakala kumnandi ... , kuhle ... okwesithathu kuyenzeka, kepha ukuphinda into efanayo ngaso sonke isikhathi uma ubhekisa kimi, kusuka ekuhlekeni kuye ekushaqeni. Futhi angikusho kusimo esingesihle, ngoba ngiyaqiniseka ukuthi okuncane ohlose ukukona, ngikholwe ukuthi nginesiqiniseko sokuthi awuyena umfana okhuluma izinto ngobisi olubi.
Kakade kusuka kulokho ozophendula kukho UGaara njalo lapho esho okuthile kimi….
Kufanele uqaphele kakhulu okubhalayo ngoba kwesinye isikhathi kubukeka sengathi awukuqapheli ubukhulu balokho okuvezayo, njengoba kuleso senzakalo ubize amaMongol esisebenzisayo MacOXS
Iqiniso lokuthi kungenzeka ukuthi ukufundwa kwesiJapane kuthi kukude akukuniki ilungelo lokuthi usho ukuthi mubi, unelungelo lokusho ukuthi awuthandi amaJapane, kepha uyazi ukuthi yini umehluko phakathi kokunye omunye? Ukuthi okushilo kuyisibonakaliso sobandlululo -Ngokusho kwakho, amaJapane amabi ngoba angamaJapan- kanti eyesibili kumane nje kuyindaba yokunambitha.
Ngiyaphinda ngiyasho ukuthi akuyona into yomuntu siqu, noma ukuthi angikwazi ukubekezelela, kodwa kufanele uqaphele okushoyo ...
Sengiyibonile imidlalo yabesifazane kodwa ngeshwa esifundeni sami izinga lobuchwepheshe liphansi kakhulu, sengathi bangamantombazane egcekeni lesikole. Futhi ukuba yinsimu enkulu kangako awukwazi ukuqonda ezinye izimfanelo ezinhle
Okushoyo kuyiqiniso, kodwa futhi kuyingxenye yalokhu engikushoyo: kunokushoda kokwesekwa kuwo wonke amazinga ukuze ibhola labesifazane lisuke.
Futhi labo bangabesifazane? … Abesilisa abampofu baseSpain, abangavikelekile ngokomthetho futhi benomusa wabesifazane. Ngendlela, ngicabanga ukuthi izibalo zithi I-Federation of Progressive Women lapho kushiwo khona ukuthi abesifazane abakhulelwe abayisishiyagalombili kwabayishumi bake bahlukunyezwa ngohlobo oluthile lobulili ngenxa yobulili babo, nabo bayizibalo ezakhiwe ngabesifazane. (http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/24/espana/1290595315.html)
Umthetho ovikela umuntu ngeke ube mubi, kungakhathalekile ubulili, ubuhlanga, inkolelo noma ubuzwe, kepha uma umthetho usetshenziswa kabi ngakho akuyona inkinga yomthetho nokuthi ngubani owukhiqizile, kuyinkinga yesikhungo ophethe ukusebenzisa umthetho.
Uma umuntu wesifazane eqamba amanga ukuze azuze inzuzo esivivinyweni akulungile, kepha kubi kakhulu ukuthi labo abaphethe ukudlulisa ubulungiswa abawaqinisekisi amaqiniso angempela ngoba lokho okuhlanekezelwe akuwona umthetho, kepha wona lowo moya walowo mthetho okugcina kungukuphathwa kobulungiswa.
Ngokomlando, abesifazane bahlukunyezwe kakhulu kunabesilisa futhi ukuhlukunyezwa sekuhambile ekunikeleni ngendodakazi yabo emshadweni ohlelwe ukuba kube lula kwezomnotho, kudlula isithiyo sokuvotela ababusi babo futhi, nanamuhla, ukukhulelwa kungumsebenzi ophazamisa.
Kungani uma kuqulwa icala owesifazane angathi ushayiwe noma waphathwa kabi kanti izwi lakhe alibuzwa noma, okungenani, unokwethenjelwa ukwedlula abesilisa? Hhayi-ke, ngoba ngokomlando bekulokhu kuyiqiniso ... kuze kube maphakathi nekhulu leminyaka elidlule owesifazane kwakudingeka abekezelele ukuphathwa kabi "kwendoda yendlu" ngoba wayethembele kuye ngokwezezimali. Futhi lokho kwakusho ngisho nohlobo lobugqila bobulili futhi "kwakuyisibopho" sakhe ukwanelisa umyeni wakhe noma ngabe uyafuna ... noma cha.
Namuhla udaba akumele lusenjalo, noma kunjalo luyaqhubeka ukwenzeka.
Ingabe inkinga madoda? Cha. Inkinga ingeyenhlalo futhi isukela emfundweni yezwe esiyithola komama bethu abenza izimo ezithile zokuziphatha kwabesifazane abaphazamise ukuthi kusho ukuthini ukuba ngowesifazane, kube sengathi ukukhipha ubhodisi kuwuphawu lwenkululeko noma ukweqa kusuka embhedeni kuya ukulala ocansini ngokuthanda kuwuphawu lokulingana.
Angazi noma laba besifazane obakhulumile bangabesifazane yini futhi nginakekela ngempela, kepha uma ngandlela thile abesilisa "belahlekelwe amalungelo athile" kungenxa yokuthi baphinde baxhaphaza amalungelo abo amakhulu eminyaka.
Futhi ngaphambi kokuthi othile angibize ngo-feminazi, ngizobakhumbuza ngalokho okushiwo yiphrofayili yami: «... graphic designer by profession at 5% and wife and mother at 94% ... I use the 1% esele yesikhathi sami to pamper myself»
Ngokuphathelene nokuthi uphendula uthini kuGaara njalo uma ethi okuthile kimi ukungasho ...
Uma ubona ... angiphenduli nokumphendula ... LOL !!!
Ngokuthatha isibalo esivela kumfelandawonye wabesifazane baseSpain PROGRESSISTS, futhi ngiyakuqinisekisa, ukuthi amaPROGRESSISTS, konke ukuphawula kusalokhu kubuzwa, sonke eSpain siyakwazi ukukhohliswa kwemithombo yezindaba ezinamaphiko angakwesobunxele nama-pijiprogres, noma njengoba abanye bewabiza kanjalo, osonxiwankulu :) .
Nalu olunye ulwazi
Okwenzelwe nje ukuthatha isibalo kumfelandawonye wabesifazane baseSpain ABAQHUBEKAYO, futhi ngiyakuqinisekisa, ukuthi abathuthukisi, konke ukuphawula kusalokhu kubuzwa, sonke eSpain siyakwazi ukukhohliswa kwemithombo yezindaba enamaphiko angakwesobunxele kanye ne-pijiprogres, noma njengoba abanye bebabiza kanjalo , osonhlalakahle
Ngikutholile ... Ngicabanga ukuthi kuzofanele ngamukele njengezixhumanisi "ezivumelekile" ozihlinzekayo ngoba ngokusobala lelo iqiniso kuphela OFUNA UKULAMUKELA. Ngoba ekugcineni iqiniso lokuthi ngethula izibalo okuthi, ngokusho kwakho kanye nabakholwa nabo kwezombusazwe, azisebenzi alilahli ezami izimpikiswano. Kulungile, ake sithi lezo zibalo azizinhle ... ngabe konke engikuphikisile kamuva kusengamanga? :
Kungani ovivinyweni owesifazane angasho ukuthi ushayiwe noma waphathwa kabi kanti izwi lakhe alibuzwa noma, okungenani, uthembekile ukwedlula abesilisa? Hhayi-ke, ngoba ngokomlando bekulokhu kuyiqiniso ... kuze kube maphakathi nekhulu leminyaka elidlule owesifazane kwakudingeka abekezelele ukuphathwa kabi "kwendoda yendlu" ngoba wayethembele kuye ngokwezezimali. Futhi lokho kwakusho ngisho nohlobo lobugqila bobulili futhi "kwakuyisibopho" sakhe ukwanelisa umyeni wakhe noma ngabe uyafuna ... noma cha.
Angazi noma laba besifazane obakhulumile bangabesifazane yini futhi ngikhathalela ngempela, kodwa uma ngandlela thile abesilisa “belahle amalungelo athile” kungenxa yokuthi baphinde baxhaphaza amalungelo abo amakhulu eminyaka.
Tina, ngivumele ngikulungise ngento eyodwa ngoba ushiya amadoda aseSpain kabi kakhulu. Akukho ukuhlukunyezwa okungaka eSpain.
Uzikhohlisile lezo zindaba ezimayelana nabesifazane abakhulelwe. Akukhona ukuthi "abesifazane abakhulelwe abayisishiyagalombili kwabayishumi bake bahlukunyezwa ngohlobo oluthile lobulili." Izindaba ukuthi abesifazane abayisishiyagalombili kwabayishumi abashaywayo babhekana nodlame olubhekiswe kwabesilisa ngesikhathi sokukhulelwa. Futhi uzoqonda ukuthi uma indoda iyigwala ngokwanele ukushaya owesifazane ongakwazi ukuzivikela, kuyinto ejwayelekile ukuthi akanendaba nokuthi ukhulelwe. Kuyangimangaza ukuthi ababili kwabayishumi abakuqhubeki nokuhlukumeza ngesikhathi sokukhulelwa.
Kungahle kungabi khona ukuhlukunyezwa okungaka eSpain, njengoba kungekho ezweni eliningi, kepha kuhlala kunokuhlukile. Owesifazane uyaqhubeka nokuzizwa ethukuthele, ephathwa kabi, edlwengulwa, ehlukunyezwa ngokufanayo eSpain, njengaseChina, njengakwezinye izingxenye zomhlaba lapho kunamadoda (uma engabizwa kanjalo), anganqikazi imizuzwana emibili baphakamise isandla sabo bakhiphele intukuthelo yakhe kwabesifazane abathile. Futhi asikhulumi kuphela ngodlame lwasekhaya, kepha ngokukhishwa emphakathini emisebenzini ehlukahlukene emphakathini, emisebenzini ... njll.
ESpain ukulingana kuqinisekiswa ngumthetho nokuthi emazweni amaningi akwenzeki. Okunye futhi ukuthi uma sekwenziwe umthetho, isicupho siyenziwa. Futhi kulokhu kunezicupho eziningi ezilimaza bobabili ubulili. Sinezinkinga futhi sifuna izixazululo. Umphakathi uzohlala unama-apula amabi, kepha umphakathi wonke uyakuqaphela ukulingana ngokobulili, okuqhubekayo nokugcina inkolo.
"Abesilisa abampofu baseSpain" angibathandanga. Unyaka nonyaka abantu abangama-4500 XNUMX bazibulala eSpain kanti iningi labo lingamadoda (kathathu). Masingakhathali ngokuhlupheka kwabanye. Amadoda nawo ahlupheka futhi ahlala ezimweni ezingafanele.
Uzikhohlisile lezo zindaba ezimayelana nabesifazane abakhulelwe. Akukhona ukuthi "abesifazane abakhulelwe abayisishiyagalombili kwabayishumi bake bahlukunyezwa ngohlobo oluthile lobulili." Izindaba ukuthi abesifazane abayisishiyagalombili kwabayishumi abashaywayo babhekana nodlame olubhekiswe kwabesilisa ngesikhathi sokukhulelwa.
Inhloso yami akukhona ukubeka phansi amadoda aseSpain, empeleni omunye wamadoda angcono kakhulu engiwaziyo, engimkhonzayo futhi ngize ngiqambe indodana yami ngegama lakhe, ungowaseSpain.
Vele ngiyavumelana nawe ukuthi lezi zibalo zibonakala ziphakeme kakhulu kimi futhi angazi noma zimele iqiniso, kepha iphuzu yilokho elikushoyo U-Elav
Kungahle kungabi khona ukuhlukunyezwa okungaka eSpain, njengoba kungekho kokuningi emhlabeni, kepha kuhlala kunokuhlukile
Okusemqoka wukuthi kukhona "okwehlukile" okuningi, futhi okubaluleke kakhulu ukuthi kunokwaziswa okuningi ngomphakathi ngakho. Kungakho izimangalo ze Pandev Kubonakala kimi ukuthi bagcina ifomu ngaphezu kwengqikithi.Kunendaba yini ukuthi umthetho uvelaphi, kulokhu ovikela abesifazane ekuhlukunyezweni? Awukho yini umthetho othi sonke sinelungelo lokuqulwa kwecala ngokulunga nangokushesha?
Ezweni lami kukhona nemithetho evikela abesifazane ekuhlukunyezweni, angazi noma bangcono yini noma babi ukwedlula leyo ka España, kodwa impela yize sicabanga ukuthi singompetha bentando yeningi kanye nobulungiswa, iqiniso ukuthi kusashiya okuningi okulangazekayo.
"Abesilisa abampofu baseSpain" angizange ngibathande
Kuyiqiniso ukuthi akuyona inkulumo yami enenhlanhla enkulu, kodwa ngicela uyithathe ngokomongo: impikiswano yami kumazwana ehaba ahlose ukusola kuphela abesifazane ngomthetho ongasetshenziswanga kahle ngabesilisa nabesifazane.
Kufanele uthembeke futhi uqaphele ukuthi ngendlela efanayo kunamaphesenti amakhulu abesifazane abahlukumezayo abangazithinti izinhliziyo zabo? ukuduna noma ngubani osele. Lokhu kuyiqiniso futhi ngeke siwavale amehlo sithi akwenzeki, kodwa lokho akusho ukuthi imithetho mibi, kukhombisa ukuthi kukhona abantu ababi, kungaba abesilisa noma abesifazane.
Uyabona ... Abesifazane bayimbangela yezimpi eziningi nokuphazamiseka ...
Imbangela ... yebo, izimbangela engicabanga ukuthi azikho. Akunjalo UHelen waseTroy.
Kepha futhi ngokujwayelekile, ngokwami ​​engikwaziyo, akumangazi ukuthi okuthunyelwe okunikezelwe ukuhalalisela abesifazane osukwini lwabo kuholela enkulumweni yalolu hlobo, kuhlale kukhona labo abangcolisa izihloko ngamazwana walolu hlobo:
Isidalwa esihle kakhulu futhi okuyingozi kakhulu, ngaphezu kwenyoka XD
Ngizizwa nginesibopho sakho konke okubekiwe, ngoba ngokuphawula kwami ​​-ngingenacala-, nginike isibhamu sokuqala ochungechungeni lwama-diatribes anezimpande ezijulile.
Ngeke ngixoxe ngesikhundla esisodwa noma esinye, ngoba ekugcineni wonke umuntu unombono wakhe futhi kunzima kakhulu ukuvumelanisa okuphikisanayo. Ukuthi ubulili besifazane bonakaliswe ngokuphelele yizinkolo, izinhlelo zezomnotho nezepolitiki zalo mphakathi "owadalelwa amadoda" akunakuphikwa.
Awudingi ukuzungeza umhlaba kaningi ukubheka amazinga aphindwe kabili lapho kuhlolwa khona imizamo yabesifazane uma kuqhathaniswa neyabesilisa, noma leyo nkolelo-mbono eqale ukuzungeza isibalo sabesifazane, icishe imphoqe ukuthi ahambe njalo lihle futhi lihambisana nezidingo zobuhle zomphakathi olahlwe ngokuziphatha. Akudingekile ukuthi noma yimuphi owesifazane olwela amalungelo abesifazane eze, njengoba usho, ukugcizelela ukungabi nabulungisa; kufanele ubheke okungokoqobo futhi ukugxeke, unakekele izinhloso eziyisisekelo.
Umthetho, okusengowokuqalwa okuhlobene, awunaphutha futhi ungaphansi kokuzivikela ekusetshenzisweni kabi. Vele, lokho kudlulela ngalé kwabantu abathintekayo esivivinyweni; umthwalo kufanele ufunwe enkantolo yokwahlulela uqobo nasekukhanyeni kwayo lapho kwenziwa izinqumo ezidinga ukuphenywa nokucatshangelwa.
Angizithandi izimpi zabobulili obufanayo, ngakho-ke isincomo sami esinamandla ukuthi uzikhawulele ekujabuleni nasekuphileni ngokuhlonipha. Uma sikwazi ukuhlalisana ngokuthula, konke okunye kuzosebenza endleleni. Lokho, ngamafuphi, ukuthi siyimikhiqizo yezenhlalo enedethi yokuphelelwa isikhathi futhi imibono yethu, ngokuhle noma ngokubi, ingaphansi kwezimo ezihlobene nempucuko, kwesinye isikhathi, esingayiqondi ngokugcwele.
Izibalo aziphezulu. Uvele ubhale okuthile okungelona iqiniso ngengozi. Ngiyaphinda ngiyasho ukuthi lezi zindaba zikhuluma ngabesifazane ABAHLULEKILE NGAPHAMBI abaqhubeka nokuhlukunyezwa ngesikhathi sokukhulelwa okulandelayo (abesifazane ngaphandle kokuhlukunyezwa abazifaki izibalo). Kusobala ukuthi ukukhulelwa akumshintshi umuntu onodlame. Futhi yebo, kuyihlazo ukuthi ukuphawula kudluliselwe kulezi zinkomba.
isikhathi osibize ngaso thina abasebenzisa iMacOXS Mongols
Cha, engikushilo ukuthi labo abathenga i-Photoshop ngo-1000 € babeyiziwula.
Ngabe iMac ibukeka njengosizi kimi? Yebo, ngibe nayo eyodwa futhi ayisho kakhulu ama-macaque amaningi
Iqiniso lokuthi kungenzeka ukuthi owesifazane waseJapan ukude (…) okushilo kuyisibonakaliso sobandlululo - ngokusho kwakho, abesifazane baseJapan babi ngoba bangamaJapan
Ngingabaza kakhulu ukuthi owesifazane waseJapane uyasifundela ngenxa yolimi nokunye, ngendlela efanayo nokuthi angikwazi ukufunda ibhulogi ngesiJapane.
Ngithi zimbi ngenxa yobuso bobuso, azibonakali zizinhle kimi, ezingagcini eJapan kuphela, kodwa naseChina, Korea, Thailand nakwabanye.
Ngendlela efanayo, ungasho ukuthi ukhetha abantu baseMexico, angicabangi ukuthi noma ngubani uzokhubeka, okungenani hhayi mina.
Ukucasulwa yilokho yi-bullshit.
Into mayelana necocoa ukuthi bobabili i-elav ne-KZKG ^ uGaara, ngokwengxenye enkulu, banomkhuba wokusho ngokuthunyelwe ukuthi ngiyabazonda abesifazane futhi ngibacabanga kabi ngabo.
Futhi noma ngabe bakuthathaphi, kufanele kube kungafuni ukuba nentombi, nokuyinto engcono kakhulu yokugwema ukuyilimaza.
Uhlala usho into efanayo, ukuthi uma ungafuni ukumzwisa ubuhlungu (noma ukuthi ubunguHannibal Lecter) .. Hhayi-ke ndoda, ngingakutshela izinto ezimbili kuphela maqondana nalolu daba:
1- Noma uthintana nodokotela wezengqondo noma wezifo zengqondo ngoba ungumuntu ongahlukumeza / ungumbulali.
2- Noma usanda kubona ukuthi ukwesaba kwakho akubalimazi, kepha kuphambene impela, ukuthi bazokwenza ucezu.
I-windousico, angibathandi abesifazane abanemisipha, empeleni labo ababenza bahluke kwabesilisa ukuthi, bangabesifazane, hhayi izinqe zemisipha, kimi akubukeki, kodwa ukuthanda umbala.
Futhi yebo, ngicabanga ukuthi abesifazane kufanele babe bahle emadodeni, njengamadoda ngabesifazane, kungukuphela kwakho konke ukuba ngokwemvelo.
Bheka ndoda, sengineminyaka eminingi ngishintsha isimilo sami.
Ngaphandle kwalokho, isazi sokusebenza kwengqondo noma bonke labo matasano abasizi ngalutho kimi ngoba angikaze ngivume.
Uyangihlekisa kodwa awungazi, mhlawumbe ukube ubungazi ngempela ubungazisindisa wena konke lokhu, futhi ubungacabanga ukuthi, "Kungcono uma engenayo intombi ngoba uyithatha . "
@ pandev92, kuya ngokuthi usho ukuthini ngowesifazane onemisipha. Owesifazane onempilo akayona i-flaccid. Ama-pectorals athuthukisa ukubukeka kwesibungu sabesifazane, izinqe zithuthukisa amajika athile futhi ithoni enhle yomzimba ivimbela ukudangala, ukushintsha kwemizwelo futhi kunika umuntu amandla athe xaxa.
Angikuthandi ukweqisa. Isikhwama sesikhumba esigcwele amathambo asibonakali sikhanga kimi, kanjalo nomakhi womzimba kanye nomuntu onesisindo sokukhuluphala ngokweqile akanciphi.
Futhi i- @ pandev92, kubonakala kimi ukuthi isimo sakho sengqondo ngabesifazane abanomthethosisekelo omzimba okhohlakele asiyona engcono kakhulu, noma nokuthi ubuyisibonelo esiphakeme (angikubonanga, mhlawumbe nginephutha). Ungathanda ukubizwa ngokuthi uyindoda enesizotha noma enesidoda? Awukwazi yini ukusebenzisa izichasiso ezingeke zikhubekise noma ngubani ofunda ukuphawula kwabo?
Ngiyazinikela kwezepolitiki, bangibize ngezinto ezimbi kakhulu kunalokho, impilo akuyona eyabantu abakhalayo, kepha eyabantu abanesibindi abakwaziyo ukuxhasa yonke into futhi abangathintwa yimibono yabanye. Impilo akuyona eyalabo abalandelayo, kodwa yalabo abazenza baqhubeke :).
Ukuthi bayilokho abayikho ngempela akunandaba, kunalokho leyo nto abayisho ngenhla itholakala kakhulu ngokuzithoba nangokuzithoba kunase-machismo "nangengqondo yomuntu."
Lokho kungikhumbuza isiqephu saseSouth Park lapho ubaba wengane eyodwa athi "amaNiggers" ohlelweni lomdlalo weTV ngaleso sikhathi kwaba khona isiphithiphithi ezweni lonke "esaba" ubandlululo. Ekugcineni, bonke abakhongolose babethukuthele futhi bedabula izingubo zabo befuna ukushaya umthetho ngenxa yalokho futhi ingqungquthela emnyama yiyona kuphela eyayiphikisana nayo ngoba, ngaphezu kokuba yisiphukuphuku, lowo mthetho wawunobandlululo (mbumbulu) ukucwaswa).
Yilokho okwenzekayo, ukuthi ngokufuna ukuba ngupapa ngaphezu kukapapa futhi nomgqugquzeli futhi "abalinganisa" kunanoma ngubani omunye, kuphuma imithetho engenangqondo, njengaleyo "yodlame lobulili" nokuyinto ekhona kuphela lapho indoda iphatha kabi Owesifazane kodwa hhayi enye indlela (futhi ubone ukuthi kunamacala ngoba kube nabesifazane okuthe ngezindleko zokungavikeleki emthethweni balahlekelwe yingqondo futhi benza futhi baphule, ngoba kufana nokushaya i-mocho). Kungumthetho ongenangqondo ngoba udlame wudlame noma ngabe luyini, ubudlova bujeziswa njalo, noma ngukuthi uma owesilisa eshaya omunye, akagwetshwa? Abesifazane ekuhlukunyezweni kwendoda?.
Futhi lolo hlobo lwemithetho (olubandlululayo "oluhle" luvame kakhulu, hhayi kuphela kwabesifazane, kepha nasezindabeni zobuhlanga, ezocansi, njll. Futhi okubi kakhulu kunokujwayelekile, ukuthi yizinto ezamukelwe futhi zibonwa ngamehlo amahle, kucishe kube ubuhle ukuhambisana nalokhu kubandlululwa.
Okuyiqiniso ukuthi abesifazane bagubha izinhloso zethu ngendlela yangempela: http://www.youtube.com/watch?v=rLqeWwq5dYI&feature=related
Ngiyakuthanda I-Pinoe!!! Intombazane ye-Go'head !!!
Ngifisa ukuthi bayigubhe njengoMaradona noCaniggia.
PD1: Ukuzwa isikhalazo sakho ngokuthi umdlalo wabesifazane ubonakala kangakanani, noma kunini lapho uthanda khona, uqopha umdlalo wakho neqembu lakho, ulilayishe bese usazisa futhi sizokwenza okuthobekile ukushintsha izinto. Futhi kungaba yisifinyezo ngezikhathi ezijabulisayo, ukuthi ukukhuphuka i-90min kungumsebenzi oyisidina.
Uyabona ... Abesifazane bayimbangela yezimpi eziningi nokuphazamiseka ... Kulokhu okuthunyelwe sinesibonelo esiphilayo ...
Hhayi uma ngibona, izikhathi engithinte ngazo lesi sihloko zingidlile.
Ngaphandle kwalokho asisoze savumelana, sizobe sithinta kuphela imicu yabesilisa nabesifazane ngokufanayo ngaphandle kokuthi sisika, kepha akuxhomekile kimi kuphela.
Ngendlela, kunesihloko sami kuthreyi yokubuyekeza. Sicela uyihlole futhi uma ucabanga ukuthi iyahamba, yithumele. Ngiyabonga inkulungwane kusengaphambili. 🙂
Bengicabanga ukuthi ungathumela ngokuzenzakalela 0_oU ... Ngisanda kubheka igama lakho lomsebenzisi, manje usungakwazi 😀
Ingxoxo phakathi kwabasebenzisi ababili be-Linux
Ideskithophu Engcono Kakhulu ye-Linuxero: Mashi 2012